Guddoomiye Aqalka Sare oo kasoo horjeestay Go’aankii Golaha Shacabka kuna eedeeyay Mursal - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Guddoomiye Aqalka Sare oo kasoo horjeestay Go’aankii Golaha Shacabka kuna eedeeyay Mursal
Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in isaga iyo guddoomiyaha Golaha Shacabka aysan isku wanaagsaneyn.
“Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka xiriir fiican hadda kama dhaxeeyo waxaana u sabab ah qodobo sharci gaf ah oo guddoomiyahaasi uu sameeyay ayaan anigu…. waayo sharci baan ku shaqeynaa sharci gaf uu ku shaqeynayo, dee ma jiro, ayuu yidhi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: “Hal midna ogaada, Dastuurku ma siinayo baarlamaanka inuu kororsiimo sameysto ama u sameeyo madaxweyne, iska daa inuu hal Aqal taas sameeyee labada Aqal xitaa xaq uma laha.”
Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa horay isugu khilaafay mid ka mid ah qodobbada lagu murmay ee ku saabsan doorashada, kaasoo la xiriira hannaanka doorasho ee gobollada waqooyi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa qalinka ku duugay qaraarka Golaha Shacabka ee labada sano loogu kordhiyay xilka inkastoo ay tallaabadaas si aad ah uga soo hor jeesteen mucaaradka iyo qaar ka mid ah dalalka beesha caalamka.
Previous articleXildhibano sheegay in weerar lagu yahay Saadaq Joon kuna baaqay in la difaaco
Next articleMas’uuliyiin lagu xiray Magaalada Dhuusamareeb